Mayelana Nathi - Shangke Chemical
Xuchang Shangke Chemical Co., Ltd. yasungulwa ku-2008, e-Fine Chemical Industrial Park yaseZhangpan Town, e-Xuchang, esifundazweni saseHenan, enezigidi eziyizigidi zamamitha ayizigidi ezingu-10, impahla ephelele ye-10 million yezigidi zase-US, kanye nabasebenzi abangaphezu kwe-100.
I-Shangke Chemical yinkampani ephezulu echwepheni ezisebenzayo ezizimele eziphambili zokwelapha (APIs). Ukuze ulawule ikhwalithi ngesikhathi sokukhiqiza, inqwaba yabachwepheshe abanolwazi, imishini yokukhiqiza yokuqala kanye nama-laboratories yiwona amaphuzu ayisihluthulelo. Ngaphansi kwemithethonqubo ye-ISO 9001: Uhlelo lwekhwalithi ye-2015 nokuphathwa okuqinile, imikhiqizo ephezulu isebenza kusiza imakethe yethu yande emazweni ase-United States, eYurophu, eJapane nakwamanye amazwe, ngezikhungo zocwaningo lwendawo kanye nezinkampani zemithi, futhi siyaqhubeka sihlola nethuba lokukhonza amaklayenti amaningi.
Ngomqondo wayo wokwenza izinto ezintsha kanye nokuvikela imvelo, iShangke Chemical izimisele ukufeza izibopho zayo zenhlalo yezempilo yabantu, kanye nomqondo "wokuqanjwa kwesayensi nezobuchwepheshe, ukuvikela imvelo eluhlaza, ukuthembeka nokuthembekile, nentuthuko ejwayelekile", ezinikele ukuhlinzeka amakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ngamanani afanele, imikhiqizo yekhwalithi kanye imisebenzi yezobuchwepheshe esebenzayo.
Amakhasimende akwaShangke Chemical anwebelele eNyakatho Melika, eYurophu, eNdiya, futhi siyaqhubeka nokuhlola futhi sisebenza kanzima.
Izinkampani ezihambisana nomqondo "wokuqanjwa kwesayensi nobuchwepheshe, ukuvikela imvelo okuluhlaza, ukuthembeka nokuthembekile, nentuthuko ejwayelekile", ezinikele ukuhlinzeka abathengi ekhaya nakwamanye amazwe ngamanani afanele, imikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezifanele zobuchwepheshe.
Iminyaka engu-20 yembonini isipiliyoni.
Ubuchwepheshe obusha kakhulu
I-ISO9001: I-2000 ne-CGMP Isitifiketi.
Umkhiqizo usebenza kakhulu futhi unesayensi yakamuva
kanye nempumelelo yezobuchwepheshe.
Imikhiqizo engabizi, ukwehliswa kwamanani akubeki phansi insiza.